Caydhinta Komishanka Doorashooyinka Qarranka: Daw Mise Daw-Darro? | Hangool News
Caydhinta Komishanka Doorashooyinka Qarranka: Daw Mise Daw-Darro?
October 23, 2018 - Written by Hangool News 1
Komishanka doorashooyinku waa haayad loo dhisay ka garsooridda doorashooyinka dalka lagga bilaabo mid deegaan ilaa mid madaxtooyo. Ku-shaqaynta karti ay caddaalad iyo dhexdhexaadnimo wehelisaa waa laf-dhabarta dhaqadda KDQ. Wiiqista amma ka arradnaanta sifooyinkaasi waa khatarta ugu weyn ee uu komishanku wajaho, taas oo ka dhigan in uu lumiyay kalsooniddii cidda uu u garsoorayo.
Eedaynta la eedaynayo KDQ-ku waa in ay noqoto mid caddaymo ay weheliyaan, si cad na loogu go’aan qaaddan karo in komishanka doorashooyinku aanu ahayn mid dhexdhexaad ah, cid gooni ah na u xaglinaya. Sidaas awgeed, komishanka afaraad ee doorashooyinka qarranka Somaliland ee golaha wakiiladdu uu ansixiyay 29 Nov. 2014 ma sameeyay gefef sabab
u noqon kara luminta dhexdhexaadnimaddii garsoor, mise cabashaddu laga cabbanayaa ayaa ah mid siyaasadaysan? Qoraalkan koobban waxa aan rogrogi doonaa jawaabta su’aashan anigoo isku dayaya in aan ku ladho caddaymaha la xidhiidha.
Bishii June, 2018 waxa waraysi ku saabsan doorashaddii madaxtooyadda Somaliland ee qabsoontay 13 Nov. 2017 laga qaadday gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qarran, Abdiqaadir Iimaan. Waxa la weydiiyay su’aal la xidhiidhay tiraddii goob-joogayaashii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa ee kormeeray doorashada iyo waliba qiyaas ahaan inta ay ka gaadheen boqolkiiba goobaha codbixinta. Su’aashu waxa ay ku raad-joogtay in goobjoogayaashu ay gaadheen inta badan goobaha si ay u xalaalayn karaan sida doorashadu u dhacday iyo in kale. Gud. Abdiqaadir waxa uu ku jawaabay sidan:
“1642 goobood ba goojoogayaal baa u jooga maxali ah, la soo tababaray, la train-gareeyay…” Waxa uu raaciyay “ Waxa kale oo jira goob-joogayaal caalami ah, oo ay sannadkan ahayd sanadkii ugu badnayn ee ay goob-joogayaal caalami ah ay inoo yimaaddaan, oo ay taggeen 55% in ka badan goobihii cod-bixinta.” ( Baadi-goob 2018, Daqiiqadaha 53-54:26).
Sida ku cad warbixinta ay soo saartay dalladda ururadda aan dawliga ahayn ee SONSAF, goob-joogayaasha maxalliga ahi waxa ay ahaayeen 602 qof, halka uu Gud. Abdiqaadir kaga sheegay 1642 oo joogay dhamaan goobihii codbixinaha oo dhamaa 1642 (SONSAF Report 2018,1). Sidaas si la mid ah, sida ku cad warbixinta kormeerayaasha caalamiga ahi ay ka soo saareen doorashaddii madaxtooyadda ee 13 Nov. 2017 qabsoontay, waxa ay gaadheen, isla markaana ay kormeereen 355 goob-doorasho. Waxa ay u dhiganta 22% guud ahaan 1642 goob-doorasho, halka uu guddoomiyuhu ku sheegay in ka badan 55% (IEOM Report 2018, 10). Sidaas awgeed, gudoomiyaha komishanka doorashooyinku waxa uu si cad uga been-abbuuray guud ahaan tiradda goob-joogayaashii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa iyo waliba inta ay ka gaadheen boqolkiiba tiradda guud ee goobaha laga cod-bixiyay! Hadda ba tan macnaheed?
Goob-joogashaashu waa markhaatiga nool, loogu na talogalay in uu si dhexdhexaad ah uga marag-furo sida wax u dhaceen doorashadda. In goob-joogayaasha doorashadda laga been abbuuro tiradoodda iyo inta goobood ee ay gaadheen ba ma aha wax fudud! Waa ta hore e, waa in la samaynayo markhaati-beenaale aan jirrin ba. Waa ta labbaad e, waa in natiijaddii doorashadda loo samaynayo sharciyay aan xalaal ahayn (Fake legitimization of electoral results). Waxa laga yaabbaa in dadka qaar ay ku dooddi karaan in Gud. Abdiqaadir iimaan uu si kama’ ah ay beentaasi uga dhacday amma aanu hubbin tiradda guud ee goob-joogayaasha iyo inta ay gaadheen ba. Dooddaasi waa mid jabban labba sababood ba. Waa ta hore e, Gud. Abdiqaadir waraysigaa uu bixiyay marna ba ma beenayn, sixis na kuma uu samayn ilaa maanta. Waa ta labbaad e, sida ku cad warbixinta IEOM, 20 Nov. 2017, waa hal toddobaad ka dib cod-bixintii doorashadda e, ayaa goob-joogayaasha caalamiga ahi ay la waddaageen warbixintooddii hor-dhaca ahayd komishanka doorashooyinka qarranka (IEOM Report 2018, 10). Sidaas awgeed, waa uu ogaa dhamaan macluumaadka arrintaas la xidhiidhsan, waa se uu u badheedhay marrin-habaabintaas!
Aan hore ugu socdo e, KDQ waa garsoore dhexdhexaad loogu tallo galay, xaarraan na waxa ka ah in uu dhinac tartamayaasha ka mid ah in uu u adeego. Xubin kale oo ka mid ah KDQ ayaa isaga na lagu waraystay barnaamijka Baadi-goob. Waxa la weydiiyay in uu maqlay in komishaneero ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinku ay gacmaha ula tageen ‘Muraaqibiin xisbi’ ka na saareen goobaha doorashadda qaarkood. Waxa uu ku jawaabay ” Waxa aniga i soo gaadhay in goob ka mid ah halkaa Xisbiga(Goob Idaacadda u dhow) agtiisa in inan laga saaray goobta” (Baadi-goob 2018, daqiiqada 57:00). Waxa uu qirayaa in komishaneeradda laftooddu ay gacmaha ula tageen in ay dadkii xisbiyadda kale u ilaalinayay cododkooda ay ka saaraan goobaha codbixinta si ku shubasho ay u fududaato! Waa qayral-masuulnimo iyo in dhexdhexaadnimaddii garsoor laga baxay, cid na gooni loogu adeegay! Dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay ku dooddi karaan in codka komishaneerka la waraystay la jarjaray, jawaabta na laga yaabo in aanu sidaas ba u bixin ba. Waa se dood jabban iyana; komishaneerka waraysiga bixiyay wuu nool yahay, barnaamijkana wuu daawaday amma loo sheegay ba. Mar qudha ma beenin waxaa uu sheegay ilaa maanta! Macnaheeddu waxa weeye, sidaas uu u sheegay ayay u jireen.
KDQ waa garsoore doorasho, shaqadiisu na tahay ka hor-tagga iyo maaraynta wax kasta oo saamayn tabban ku yeellan kara xalaalnimadda, caddaaladda iyo xornimadda doorashadda. Waraaqaha codbixintu waa mid ka mid ah aggabyadda doorashadda kuwoodda ugu muhiimsan, ugu na xasaasiyadda badan. Oggaansha cidda waraaqahaas qandaraaska ku heshay, iyo waliba hubbinta in shirkadaasi aanay cid gaar ah oo komishanka ka baxsan la macaamillin waa mid ka mid ah masuuliyadaha ugu waaweynaa ee KDQ. Isla barnaamijkaas Baadi-goob, komishaneeraddii lagu waraystay waxa la weydiiyay bal in ay wuxuun ka ogaayeen qaabkii lagu kala xullay shirkadaha, ciddii qandaraaska bixisay iyo waliba in ay wax kala socdaan in shirkadaas qandaraaska la siiyay, waa shirkadda Al Ghurair e, ay xidhiidh dhow la leedahay xukuumaddii Siilaanyo iyo waliba xisbiga Kulmiye, dalka na masuuliyiintooddu ay timid. Si guud, jawaabtii komishaneeraddu waxa ay noqotay in qandaraaskaas ay bixisay haayadda Creative, wax na aanay kala socon sida loo bixiyay. Waxa kale oo ay sheegeen in masuuliyiinta shirkada Al Ghurair aanay iyagu la kulmin walow ay dalka yimaadeen. Barnaamijku waxa uu soo ban-dhigay caddaymo muujinaya masuuliyiintaas oo dalka yimid, xukuumaddii Siilaanyo iyo Xisbiga Kulmiye ba na ay kulmeen! Arrintani waa masuuliyad xumo aad u weyn oo uu ku kacay KDQ!
Wallow aanay intaas ku koobnayn, bal aan ku soo ururiyo hal dhacdo oo kale. Bishii April 2018, waxa Xil. Xuseen Ahmed Caydiid (WADDANI) iyo Maxamed Muuse Abees (KULMIYE) ay isku qabteen buuxinta jago uu xildhibaan ka geeriyoodday. KDQ waxa uu soo saaray document sheegaya in Xuseen uu haysto 3981 cod kuna qoran yahay kaydka 5aad, halka Maxamed Muuse uu ka haysto 3986 kuna qoran yahay kaydka 6aad. Sida Cabdilaahi Jawaan sheegay, document-kaasi ma ahayn kii saxda ahaa, walow ay isaga ugu sheegeen markii hore in ay copy-giisa u baahan yihiin maadaama ay gubbeen documents-kii. Maxkamadda sare waxa ay go’aan ku soo saartay sidii uu xusayay document-kii uu Cabdillaahi Jawaan hayay, waxba kama jiraan na ku tilmaantay kii uu Abdiqaadir iimaan soo ban-dhigay. Bishii June 2018, waxa uu Cabdillaahi Jawaan warbaahinta u sheegay in KDQ uu xeer-ilaalinta ka dacweeyay, xeer-ilaalintuna ay u yeedhay isagoo sheegay in lagu haysto kaliya in uu soo ban-dhigay natiijaddii saxda ahayd. Arrintaas KDQ ma beeninin, ka ma na hadlin, taas oo ka dhigan in sidaas ay wax u dhaceen. Waxa su’aal ah, waayo KDQ uu u handaday Cabdillaahi kol haddii wixii uu soo bandhigay ay sax ahaayeen, maxkamadduna ay tiisii rumaysay? KDQ ayaa marka hore doonayay in uu wax mugdi galliyo, ciddii wax caddaysay na la dagaalamay!
Si kasta ba ha ahaatee, dhamaan dhacdooyinkani waa kuwo hal jiho u wadda jeedda; waa in dhaqanka KDQ uu yahay mid aan ku abtirsan aasaasiyaadka mabaa’diida uu ku dhisan yahay; dhexdhexaadnimo iyo in uu si cadaalad ah uga garsooro arrimaha doorasho. Ma aha arrimo kaliya loo macnayn karo in karti la’aani jirto, ee waa in daacadnimo laalan tahay! Sidaas awgeed, haddii dalkan loo tudhayo waa in maarro loo helo Komishanka dhaqankiisu sidaas yahay. Wixii xal aan u aro mar kale ayaan ka hadli.